foldablae herinaratra bisikileta e-bisikileta r809h amin'ny aluminium firaka rafitra 12inch - Shenzhen China Rooder Teknolojia
foldablae herinaratra bisikileta e-bisikileta r809h amin'ny aluminium firaka rafitra 12inch
Tsara Outdoor Activity E-Bike - Design ho an'ny asa ivelan'ny trano, Mpiadidy ho an'ny tanàn-dehibe tsoavaly, ny tsara voafidy kilasy ambony Aluminum firaka manampy anao hankafy ny fahafinaretana ny ivelan'ny trano.
Eco-Friendly E-Bike - 100% Electric sy entona maimaim-poana, fiarovana ny tontolo iainana, maivana, tena mora ny mitahiry sy hitondra
Unisex Design E-Bike - 2 Color (Black / Fotsy) misy, voalamina tsara mba hampangatsiaka mitady fitoriana ho an'ny vehivavy, ny lehilahy sy ny tanora, fampisehoana miavaka (Front, Back Electric fiara kapila notapahiny) manampy anao hahazo ny hafainganam-pandeha sy ny fifaliana amin'ny an-tokotany.
Unique Miasa Ireo fomba - E-bisikileta & fanampian'ny bisikileta. Afaka mifidy ny e-bisikileta mba hanana ela mandeha tsy misy pedaling, ary koa ianao dia afaka mifidy ny fomba Pas mba hanamafisana ny ezaka manokana. Ankafizo ny mitaingina amin'ny fomba rehetra. 36V 6.6AH Lithium Battery manohana hatramin'ny 25km / h tamin'ny isan-karazany ny 23-30km tsoavaly. Ary nasain'i mora (3 ora).
foldablae herinaratra bisikileta e-bisikileta r809h amin'ny aluminium firaka rafitra 12inch avy Rooder e-bisikileta orinasa
rafitra ara-nofo: aluminium firaka
Max hafainganam-pandehany: 25km / h
mileage (madio elektrika): 25km
mileage (fanampiana) 23-30km
mamaly ny fotoana: 3.5h
ambony indrindra Loading: 150kg
maotera hery: 350w
Max rehefa niakatra: 12 °
harato lanja: 14kg
reraka size: 12inch
fiasan'ny: jiro sy ny pas de
novakiny: roa kapila novakiny
damping: roa damping
seza lafika: azo ahitsy
loko: mainty / fotsy
miseho habeny (l * W * h): 107 * 45 * 90cm
mbola hanohon haben'ny (l * W * h): 107 * 45 * 73cm
Previous: Mini citycoco herinaratra scooter Rooder 48v800w r804n amin'ny maotera sy ny Lithium bateria
Next: mbola hanohon Herinaratra Scooter Rooder r803l amin'ny 10 "Feno Air Tires 45kmh ho amin'ny 40km Range
herinaratra bisikileta hevitra
herinaratra bisikileta rooder
eran'i Boligaria bisikileta
EEC citycoco herinaratra scooter Rooder r804r amin'ny ...
caigiees citycoco herinaratra scooter r804i EEC CO ...